မိန်းကလေးတွေ အချိန်အတော်ကြာနေတဲ့ Relationship ကို လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ခု - For her Myanmar
မိန်းကလေးတွေ အချိန်အတော်ကြာနေတဲ့ Relationship ကို လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၆) ခု
ဘာကြောင့်များ နှစ်ချီကြာနေတဲ့ relationship ကို အဆုံးသတ်ကြပါလိမ့် ?
ယောင်းတို့ရေ…မိန်းကလေးတော်တော်များများကrelationship နဲ့ပက်သက်လာရင် သည်းခံကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ…သည်းခံရပေါင်းများလာတဲ့အခါ အချိန်တစ်ခုကြာအောင် တည်ဆောက်ထားရတဲ့ relationship ကိုတောင် လက်လွှတ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ လက်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ယောကျာ်းလေးတွေဖက်က ကြည့်ရင်တော့ ဘာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မိန်းကလေးတွေဖက်ကဆိုရင်တော့ အရင့်အရင်က အကြောင်းတွေပါ ပေါင်းပြီး စိတ်ကုန်သွားတတ်ကြတာပါ။ ဒါဆို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ မိန်းကလေးတွေ လက်လျှော့လိုက်ကြလဲဆိုတော့…
Relationship တစ်ခုမှာ မကြာခဏရန်တွေဖြစ်နေမယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြစ်တွေပဲ ရှာနေမိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ပျော်ရွှင်ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စိတ်ညစ်ရတာ၊ ငိုရတာတွေများလာတဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီ relationship နဲ့ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကြီး ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေရောက်လာပြီဆို ချစ်သူနဲ့ စကားပြောပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါမှ မရဘူးဆိုရင်တော့ လက်လျှော့လိုက်တော့မှာပါ။
ဂရုစိုက်ခံရတာ မကြိုက်တဲ့သူ နည်းမယ်ထင်ပါရဲ့… ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဂရုစိုက်မှုဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အရာလေး တစ်ခုပေါ့.. ချစ်သူဂရုစိုက်တာများခံရရင် ကမ္ဘာလောကကြီးက သာယာနေတာမျိုး။ ရည်းစားမဖြစ်ခင်ကတော့ ကတိတွေပေး၊ ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ပေါ်တင်ထားပြီး တွဲတာကြာလာမှ အလုပ်များနေလို့၊ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီး အချိန်တိုင်း အကြောင်းပြ၊ တကယ့်တကယ်တမ်းကျ တစ်ခြုံကွယ်တစ်မယ်မေ့ရင်တော့ တာ့တာပြခံရမှာ အသေအချာပါပဲ။
တစ်ချို့ယောကျာ်းလေးတွေရှိတယ်…တွဲလာကြာလာရင် ချစ်သူကောင်မလေးကို မလေးစားကြတော့ဘူး။ လေးစားတယ်ဆိုတာ ပုံမှန် လူလူချင်းထားရမယ့် လေးစားမှုကိုပဲ ပြောတာပါ။ အရင်းနှီးလွန်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ မိသားစု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေစတာတွေကို အထင်မကြီးဘူး ဘာညာပြောတာတွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေက စိတ်ပျက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာ နှစ်တွေကြာရှည်နေတဲ့ relationship ဖြစ်ရင်တောင်မှ မာနကြောင့် လက်လွှတ်လိုက်ဖို့ ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Related article >>> အချစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်သင့်တဲ့မေးခွန်းများ
(၄) သံသယဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ လက်ပွန်းတတီးနေရင်
မိန်းကလေးတွေက မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူနားကပ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ဟိုတစ်ယောက်က စနိုက်ကြော်လား ဒီတစ်ယောက်က ရိုးဗန်းကြော်လားဆိုတာ အထာပေါက်ပြီးသား။ ရိုးရိုးသားသားခင်တာပါဆိုရင်တောင် ကိုယ်က တစ်ဖက်သားရဲ့ အကွက်တွေကို ကြိုမြင်နေတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စကားကို နားမထောင်ဘဲ ငါတို့က ရိုးရိုးသားသားပဲဆိုပြီး တားနေတဲ့ကြားက ရောရောနှောနှောသွားနေမိပြီဆိုရင် မီးပွင့်သွားတော့တာပါပဲ.. ဘယ်လောက်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုဆို မုန့်ကော အချစ်ကောဝေမစားတတ်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ လွှတ်ချခဲ့မှာပါပဲ။ (ဒီထဲမှာတော့ အချိန်တိုင်းမှာ လူတိုင်းနဲ့ သဝန်တိုတတ်တာမျိုးတွေတော့ မပါဘူးနော်.. )
တချို့ မိန်းကလေးတွေက တစ်ခါလိမ်တာနဲ့ ဖြတ်တတ်ကြပေမဲ့ တချို့ မိန်းကလေးတွေကတော့ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတာကို ယုံကြည်ပြီး နောက်တစ်ခါအခွင့်အရေးပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခဏခဏလိမ်နေတာတွေကို သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အခါ ပြောလည်းမထူးတဲ့အတူတူ အချိန်ကြာလာတဲ့ relationship ကို ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။
ယောင်းရေ…ချစ်တဲ့သူနဲ့နေချင်ကြတာ လူ့သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကို အလေးမထားတော့ဘူး၊ တန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ နှစ်ချီကြာအောင်တွဲလာသည်ဖြစ်စေ လွှတ်ချလိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှ မချစ်ရင် ဘယ်သူက ချစ်မှာလဲနော်? ဒဏ်ရာ နက်ရှိုင်းစေတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းကို အနာခံပြီး ဆွဲထားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ.. ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တတ်အောင် ကြိုးစားရင်း ယောင်းတို့ အချစ်လမ်းခရီး ဖြောင့်ဖြူးကြပါစေနော်..
ဘာကွောငျ့မြား နှဈခြီကွာနတေဲ့ relationship ကို အဆုံးသတျကွပါလိမျ့ ?
ယောငျးတို့ရေ…မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားကrelationship နဲ့ပကျသကျလာရငျ သညျးခံကွတာမြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ပေါ့လေ…သညျးခံရပေါငျးမြားလာတဲ့အခါ အခြိနျတဈခုကွာအောငျ တညျဆောကျထားရတဲ့ relationship ကိုတောငျ လကျလှတျလိုကျတတျကွပါတယျ။ လကျလှတျလိုကျတယျဆိုတဲ့အခါမှာ ယောကျြားလေးတှဖေကျက ကွညျ့ရငျတော့ ဘာမဟုတျတဲ့အကွောငျးအရာလေး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပမေဲ့ မိနျးကလေးတှဖေကျကဆိုရငျတော့ အရငျ့အရငျက အကွောငျးတှပေါ ပေါငျးပွီး စိတျကုနျသှားတတျကွတာပါ။ ဒါဆို ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးတှမှော မိနျးကလေးတှေ လကျလြှော့လိုကျကွလဲဆိုတော့…
Relationship တဈခုမှာ မကွာခဏရနျတှဖွေဈနမေယျ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အပွဈတှပေဲ ရှာနမေိမယျဆိုရငျ ဘယျလိုမှ ပြျောရှငျရမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ စိတျညဈရတာ၊ ငိုရတာတှမြေားလာတဲ့အခါ မိနျးကလေးတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ ဒီ relationship နဲ့ ဘယျလိုမှ အဆငျပွတေော့မှာ မဟုတျဘူးဆိုတာကွီး ဝငျလာတတျပါတယျ။ ဒီလို အခွအေနရေောကျလာပွီဆို ခဈြသူနဲ့ စကားပွောပွီး ဆှေးနှေးကွညျ့ဖို့ ကွိုးစားပါလိမျ့မယျ။ အဲ့ဒါမှ မရဘူးဆိုရငျတော့ လကျလြှော့လိုကျတော့မှာပါ။
ဂရုစိုကျခံရတာ မကွိုကျတဲ့သူ နညျးမယျထငျပါရဲ့… ခဈြသူနှဈဦးကွားမှာ ဂရုစိုကျမှုဆိုတာကလညျး အရေးကွီးတဲ့ အရာလေး တဈခုပေါ့.. ခဈြသူဂရုစိုကျတာမြားခံရရငျ ကမ်ဘာလောကကွီးက သာယာနတောမြိုး။ ရညျးစားမဖွဈခငျကတော့ ကတိတှပေေး၊ ဖြာလိုလိပျ ထိပျပျေါတငျထားပွီး တှဲတာကွာလာမှ အလုပျမြားနလေို့၊ ဘာဖွဈလို့ ညာဖွဈလို့ဆိုပွီး အခြိနျတိုငျး အကွောငျးပွ၊ တကယျ့တကယျတမျးကြ တဈခွုံကှယျတဈမယျမရေ့ငျတော့ တာ့တာပွခံရမှာ အသအေခြာပါပဲ။
တဈခြို့ယောကျြားလေးတှရှေိတယျ…တှဲလာကွာလာရငျ ခဈြသူကောငျမလေးကို မလေးစားကွတော့ဘူး။ လေးစားတယျဆိုတာ ပုံမှနျ လူလူခငျြးထားရမယျ့ လေးစားမှုကိုပဲ ပွောတာပါ။ အရငျးနှီးလှနျလာတဲ့အခါမြိုးမှာ ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့ မိသားစု၊ အလုပျအကိုငျ၊ ဝငျငှစေတာတှကေို အထငျမကွီးဘူး ဘာညာပွောတာတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတှကေ စိတျပကျြသှားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုအခါမြိုးတှမှော နှဈတှကွောရှညျနတေဲ့ relationship ဖွဈရငျတောငျမှ မာနကွောငျ့ လကျလှတျလိုကျဖို့ ဝနျလေးမှာ မဟုတျပါဘူး။
Related article >>> အခဈြရေးမှာ ယုံကွညျမှုခြိုးဖောကျခံရတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျပွနျမေးကွညျ့သငျ့တဲ့မေးခှနျးမြား
(၄) သံသယဖွဈစရာကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ လကျပှနျးတတီးနရေငျ
မိနျးကလေးတှကေ မွှမွှေခေငျြး ခွမွေငျတတျကွပါတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူနားကပျနပွေီဆိုတာနဲ့ ဟိုတဈယောကျက စနိုကျကွျောလား ဒီတဈယောကျက ရိုးဗနျးကွျောလားဆိုတာ အထာပေါကျပွီးသား။ ရိုးရိုးသားသားခငျတာပါဆိုရငျတောငျ ကိုယျက တဈဖကျသားရဲ့ အကှကျတှကေို ကွိုမွငျနတေဲ့အခါမှာ ကိုယျ့စကားကို နားမထောငျဘဲ ငါတို့က ရိုးရိုးသားသားပဲဆိုပွီး တားနတေဲ့ကွားက ရောရောနှောနှောသှားနမေိပွီဆိုရငျ မီးပှငျ့သှားတော့တာပါပဲ.. ဘယျလောကျခှငျ့လှတျပါတယျဆိုဆို မုနျ့ကော အခဈြကောဝမေစားတတျတဲ့အမြိုးဆိုတော့ လှတျခခြဲ့မှာပါပဲ။ (ဒီထဲမှာတော့ အခြိနျတိုငျးမှာ လူတိုငျးနဲ့ သဝနျတိုတတျတာမြိုးတှတေော့ မပါဘူးနျော.. )
တခြို့ မိနျးကလေးတှကေ တဈခါလိမျတာနဲ့ ဖွတျတတျကွပမေဲ့ တခြို့ မိနျးကလေးတှကေတော့ နောကျမလုပျတော့ပါဘူးဆိုတာကို ယုံကွညျပွီး နောကျတဈခါအခှငျ့အရေးပေးတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ခဏခဏလိမျနတောတှကေို သညျးမခံနိုငျတော့တဲ့အခါ ပွောလညျးမထူးတဲ့အတူတူ အခြိနျကွာလာတဲ့ relationship ကို ဖွတျတောကျပဈလိုကျကွပါတော့တယျ။
ယောငျးရေ…ခဈြတဲ့သူနဲ့နခေငျြကွတာ လူ့သဘာဝပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျခဈြတဲ့သူက ကိုယျ့ကို အလေးမထားတော့ဘူး၊ တနျဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျပဲ နှဈခြီကွာအောငျတှဲလာသညျဖွဈစေ လှတျခလြိုကျဖို့ဝနျမလေးပါနဲ့။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမှ မခဈြရငျ ဘယျသူက ခဈြမှာလဲနျော? ဒဏျရာ နကျရှိုငျးစတေဲ့ ကွိုးတဈခြောငျးကို အနာခံပွီး ဆှဲထားတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြတာ မဟုတျဘူးလေ.. ဒီတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြတတျအောငျ ကွိုးစားရငျး ယောငျးတို့ အခဈြလမျးခရီး ဖွောငျ့ဖွူးကွပါစနေျော..
Tags: Connection, Let go, love, Relationship, self love, tips
Stella April 18, 2019